Sida loo bilaabo Pokémon La soco Pikachu | Wararka IPhone
Sida loo bilaabo Pokémon La soco Pikachu
Pokémon Go waa ciyaarta badashay warshadaha ciyaarta fiidiyowga ee qeybta mobilada, shaki la'aan, iyo haddii kale, u sheeg Nintendo, oo aragtay qiimaha suuqa labalaab. Dhanka kale, waa inaan xasuusnaano in Pokémon Go uu yahay wax la mid ah Ingress, ciyaarta kale ee Niantic ee ku saleysan xaqiiqda la kordhiyay iyo inaysan dhameysan shaqadii. Waxay umuuqataa in wax walboo dhadhan fiican leeyihiin hadaan kudarno waxoogaa Pokémon ah. Maanta waxaan kuugu sheegi doonnaa iPhone News khiyaano yar oo dad badan oo isticmaala Pokémon Go ay ogyihiin, laakiin hubaal dhammaantood maahan, waxayna ku imaan kartaa waxtar. Sida loo bilaabo Pokémon La soco Pikachu way ka fududdahay sida aad u malaynayso haddii aad raacdo talaabooyinkan.
Intaad xasuusato, taxanahii asalka ahaa, Ash wuu diiday inuu kala doorto Squirtle, Charmander iyo Bulbasur, iyo ka dib markii uu diiday Pokémon dhowr jeer, wuxuu ku dhammaanayaa qaadashada Pikachu oo ah wehel safar. Taasi waa waxa ay tahay inaan ku sameyno Pokémon Go haddii aan rabno inaan ku bilowno xiisahayaga Pikachu. Markaan ciyaarta bilowno markii ugu horeysay, waxaan qabsan karnaa seddexdan dab, biyo iyo dhir. Hagaag, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan sii wadno socodka, haddii aan diidno inaan ugaarsano way baaba'ayaan. Waxay dib u soo muuqan doonaan dhowr jeer oo kale, laakiin mar saddexaad waa soo jiidashada, oo haddii aan diidno inaan qabsanno Squirtle, Charmander iyo Bulbasur laba ama saddex jeer, Pikachu wuxuu ku dhammaan doonaa inuu soo muuqdo, waana waqtiga aan ku qaadan doonno kubbadeena Pokéball.
Sidoo kale, ma aha mid aad u habboon, Pikachu iyo kale Pokémon ayaa soo muuqan doona dhawaan, Maahan mid ku habboon Pokémon oo aan dooran karno bilowga si aan u bilawno socodkeena, waxaan u maleyneynaa inaan mar kale ka heli doonno mar dambe heerar heer sare ah, markaa ha u qaadan si aad u culus, oo si fudud u dooro midka aad ugu jeceshahay afarta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo bilaabo Pokémon La soco Pikachu
Ash weligiis noloshiisa ma diidin inuu qabto mid ka mid ah saddexda Pokémon ee bilowga ah, dhab ahaantii wuxuu ku dhammaaday iyaga oo haysta xilli ciyaareedkii ugu horreeyay. Waxa run ahaantii dhacay ayaa ah in tababarayaal kale ay ka soo kaceen isaga hortiis oo uu horay u keenay Professor Oak, markaa Ash waxay ahayd inuu dego Pikachu. Laakiin si kastaba ha noqotee, way fiicantahay in sidan loo dhaho maqaalkaaga.
Jawaab Yuusaku Godai
Waa kan cutubka, dib u eeg: https://www.youtube.com/watch?v=ovHpcZ6p4fY
Xayawaanka ka dib, laba Shot cusub oo ku saabsan xayeysiisyada iPhone ayaa yimid iyagoo muujinaya awooda kamaradaha ee iPhone 6s
Netflix waxay lumisay macaamiisheeda sababo la xiriira kororka qiimaha qorshayaasheeda